Collaborating at GLobal Myanmar Spring Revolution Marching Rally (2nd May)(Ended)
５月２日（日曜日）に世界的なミャンマー春の革命日（Global Myanmar Spring Revolution)を国内外のミャンマー民族たちが各地及び各国で集めて国際社会がミャンマー統一政府（NUG)を認めることと独裁者を革命するデモ集会を行います。
春の革命で命を奪われた英雄たちを尊敬するため黒い服装を着て血まみれの指3本（Three Finger Salute)で世界中デモ集会を行っていきます。
📌グーグルのフォーム(Google Form)には、金曜日 (2021年4月30日) の6:00 PMまでに申し込みをお願い致します。
📌ボランティアの方々は当日(2日) 9時15分までにTTAJの集合場所（霞ヶ関駅 C3 出口周辺）にお越しいただきく存じます。
Collaborating at GLobal Myanmar Spring Revolution Marching Rally on May 2nd,2021
On 2nd of May, Myanmar ethnic brothers and sisters currently residing in Japan will take part in Global Myanmar Spring Revolution Marching Rally in order to support National Unity Government (NUG) Myanmar and to terminate Military Dictatorship once and for all. TTAJ will be participating at said Rally as one of the Marching groups hence the gathering place and time are being announced in advance.
Date: (2-5-2021) Sunday
Hours: 10:00 ～12:00
TTAJ’s Place: Tokyo Metro Kasumigaseki Station C3 Exit
TTAJ’s gathering time: 9:15 A.M
The entire world will be participating at said Rally at the same day wearing BLACK and BLOODY THREE FINGERS SALUTE to honor the fallen heroes during Myanmar Spring Revolution.
Kindly fill out the following Google Form and enroll to participate as TTAJ volunteers.
⚠️⚠️ Kindly follow these rules and regulations since we TTAJ will be joining asagroup.
📌 Fill out the Google Form no later than 6pm 30/4/2021 (Friday).
📌Please make sure to arrive at the gathering place no later than 9:15am since we will be departing asagroup.
Dress code BLACK TOP BLACK PANTS (kindly wear the closest colour if you are uncomfortable wearing Black Pants.)
📌TTAJ will be providing the following items.
- Vinyl, Protest Boards
Should volunteers have any questions on the day, do ask TTAJ members who will be wearing Red Straps.
This fight isasure win since we citizens are united to terminate the Military Dictatorship once and for all.💪🏻💪🏻
We will fight for victory. 💪🏻💪🏻
We will end this spring with victory and victory only.💪🏻💪🏻
"၅လပိုင်း ၂ ရက်နေ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအဖြစ် လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း"
ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မြန်မာတိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများစုပေါင်း၍ ပြည်သူ့အစိုးရအသစ် ( NUG )ကို နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရေးနှင့် စစ်အာဏာရှင်အမြစ်ပြတ်ပြုတ်ကျရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုလာမည့် မေလ ( ၂ )ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး နေ့( Global Myanmar Spring Revolution ) အဖြစ် ကမ္ဘာအနှံ့ စုပေါင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ ပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံဒေသအသီးသီးတွင်လည်း စုပေါင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်သည့်အတွက် တိုကျို စုပေါင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် TTAJ အဖွဲ့မှ စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းအနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် အားဖြည့်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
နေ့ရက် - (2-5-2021) တနင်္ဂနွေနေ့
အချိန် - 10:00-12:00
TTAJ စုချိန်နဲ့ စုရပ် - Tokyo Metro Kasumigaseki Station C3 Exit (အချိန် - 9:15အရောက်)
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အသက်ပေးဆပ်သွားသော သူရဲကောင်းများအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အနက်ရောင် ဝမ်းဆက် ဝတ်ဆင်ပြီး သွေးစွန်းနေသော Three Fingers Saluteပြုလုပ်၍ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ တစ်ရက်ထဲ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
⚠️⚠️ TTAJ Volunteers အနေနှင့် လာရောက် ပူးပေါင်းလိုသူများGoogle Formလေးမှာ ဖြည့်ပေးပြီး စာရင်းလေးပေးစေချင်ပါသည်။
📌သောကြာနေ့ (30-4-2021) ညနေ (၆) နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး ဖြည့်ပေးပါနော်။
📌 အဖွဲ့လိုက်သွားရောက်ပူးပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နံနက် (9:15) နာရီထက် လုံးဝ(လုံးဝ) နောက်မကျဘဲ စုရပ်ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းပေးစေလိုပါသည် ။
အောက် Black Pants (＊အနက်ရောင် ဝမ်းဆက် ဝတ်ဆင်ဖို့ အဆင်မပြေသူများရှိပါက အနီးစပ်ဆုံး အရောင်ရင့်ကို ဝတ်ဆင်လာစေလိုပါသည်) 👖
အောက်ပါလိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကို "Try Together At Japan" အဖွဲ့မှ ပြင်ဆင်ထားပေးပါမယ်။
📌 Black Mask
ပြည်သူအားလုံးညီနေတဲ့ ဒီပွဲမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အဆုံးသတ်ကျရှုံးရမယ် 💪🏻💪🏻ငါတို့တွေ နိုင်အောင် တိုက်မှာ 💪🏻💪🏻
ဒီနှစ်နွေဦးဟာ အောင်ပွဲနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ရမယ်💪🏻💪🏻